HALKAAN KA AQRISO W.W. MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 21-SEP-2020...
Monday September 21, 2020 - 10:07:29 in Wararka by Mogadishu Times
XOG: Villa Somalia oo qorsheyneysa inay soo celiso xiriirkii Imaaraadka Warar lagu kalsoonaan karo oo aan ka hel nay Ilo wareedyo kala duwany ayaa sheegaya in Madaxtooyada Soomaaliya ay qorsheyney so inay dib u billowdo xiriirka Dowladda Ima ar
XOG: Villa Somalia oo qorsheyneysa inay soo celiso xiriirkii Imaaraadka Warar lagu kalsoonaan karo oo aan ka hel nay Ilo wareedyo kala duwany ayaa sheegaya in Madaxtooyada Soomaaliya ay qorsheyney so inay dib u billowdo xiriirka Dowladda Ima araadka Carabta. Malafka dib u soo celinta xirii rkii Imaaraadka Carabta ayaa waxaa loo dhiibay Ergeyga gaar ka ah ee Madaxweyne Farmaajo u qaabilsan Arrimaha Badda Cas iyo Gacanka Cadan Max amed Cismaan Balal. Wararka ayaa sheegaya in Maxamed Cismaan Balal uu ku wajahan yah ay Imaaraadka Carabta, si uu u bilaabo wada hadalada, isagoo farriin ka sida Madaxweyne Farmaajo. Lama shaacin farriinta Madaxweyne Farma ajo u dirayo Imaaraadka, waxaase jiray xiriirka 2da dal inuu aad u xumaaday tan iyo markii Dowladda Madaxweyne Farmaajo la wareegt ay lacag dhan 9.6 Milyan Dollar muddo laga jo ogo 30 bilood, Sidoo kale DFS ayaa ku gacan sayrtay heshiiskii dekedda Berbera. R/Wasaarqha Itoobiya oo ay xulufo dhow yi hiin Madaxweyne Farmaajo ayaa muddooyin kanba ka shaqaynayay sidii loo soo celin lahaa xiriirka Madaxweyne Farmaajo iyo Imaaraad ka, iyadoo shuruudaha Imaaraadku dalbaday in la fuliyo si loo soo celiyo xiriirka 2da dal ay ka mid yihiin in D/Soomaaliya bixiso cudur da ar rasmi ah, ayna soo celiso lacagaha, aqba sho heshiiska dekedaha Berbera iyo Bosaaso.
R/Wasaaraha magacaaban ee Soomaaliya Md.Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan la qa atay Sii-hayaha R/Wasaaraha dalka Mahdi Ma xamed Guuleed Khadar, Wasiiro iyo Xildhib aanno ka tirsan BFS.
Kulanka ayaa ahaa mid is-barasho ah, waxaana Sii haya ha R/Wasaaraha& Xildhibaann ada wehliyay ay R/ Wasaaraha magacaaban ugu hambalyeeyeen xilka Cusub ee u magaca abay Madaxweyne Maxamed C/hi Farmaajo.
Md. Mahdi Guuleed iyo Xildhibaanada ayaa R/Wasaare Maxamed Xuseen Rooble u she egay inay taageersan yihiin, isla markaana gar ab istaagi doonaan, si uu u guto waajibaadkii sa shaqo ee loo idmaday.
Maanta ayaa la filayaa in Xildhibaanada G/Sha cabka la horgeeyo R/Wasaaraha Cusub, si codka kalsoonida loogu qaado, iyadoo lagu wado marka la ansixiyo in maalin ka dib la soo dhiso Xukuumad Cusub.
Md.Cabdiraxmaan Cabdishakuur "Soomaa liya waxaa laga badbaadiyay dhibaato dhici laheyd"
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur War same oo shir jaraa'id ku qabtay M/Muqdisho ayaa sheegay in heshiiskii la xiriiray arrimaha doorashada ee dhowaan lagu ka la saxiixday Villa Somalia uu ah aa mid dalka ka badbaadinayay dhibaatooyin adag oo kusoo fool lahaa.
Md.Warsame si cad uma uusan qayaxin caqab addaas, laakiin wuxuu shirkiisa saxaafadeed ku dhaliilay madaxweyne Farmaajo uu ku eede eyay inuusan ka shaqeyn intii uu xafiiska jo ogay arrimaha doorashooyinka dalka.
Waxa uu dhinaca kale soo jeediyay in he shiiskii lagu gaaray Muqdisho laga shaqeeyo sidii loo fulin lahaa, loona dhaqan-gelin lahaa.
Hadalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ku soo aadaya xilli Soomaaliya ay gashay mar xalad kala guur ah, dhammaadka sanadkaanna la qorsheynayo in dalka uu doo rasho galo. Si taasi ay u dhacdana dadka siya asadda ka faallooda ayaa soo jeedinaya in la fuliyo heshiiskii dhowaan lagu garay Muqdiho.
Siihaya W/W/Caddaaladda XFS Md.Xasan Xuseen Xaaji ayaa Shalay ka qeeb gallay kul an ay soo qabanqaabiyeen Culimada Sooma aliyeed iyo Uruuka Bulshada rayidka.
W/W/Cadaaladda Abuukaate Xas an ayaa khudbad ka jeediyay kula nkaas oo ka dhacay Muqdisho, isa goo ka hadlay falalka xad-gudub yada ah ee mararka qaarkood ka dhaca dalka.
Waxaa uu sheegay Wasiir Xasan Xuseen in muhiim ay tahay in meel looga soo wada jey sto falal kufsiga ah, waxaana uu tilmaamay in sharciga lala tiigsan doono cid waliba oo ku lug leh arrimaha kufsiga, isla markaana laga qaadi doono tallaabo adeg.
"Bulshadana qeebaheeda kala duwan waxa an kula dardaarmayaa in hal dhinac looga soo wada jeesto falalka xad-gudubyada ah, waxa kale u baahan in lala dagaalamo waxyaabaha mukhaadaraadka iyo maandooriyaasha kuwa as oo sababa wax waliba xumaan ah oo faldan biyeed ah” ayuu yiri W/Wasiir Xasan Xuseen.
Si kastaba M/Muqdisho ayaa waxaa dhawa an fal isugu jiray kufsi iyo dil loogu geystay Ma rxuumad Xamdi Maxamed Faarax, ka dibna la ga soo tuuray dabaq lix biyaano, waxaana kiis kaas loo qabtay 12 ruux, sida uu shaaciyay Tal iska Booliska dowladda.
XOG: Kheyre oo ku biiray siyaasiyiinta xiri ir ka dhow la leh Imaaraadka & Qorshaha uu damacsan yahay
R/wasaarihii xilka laga qaaday Xasan Cali Kheyre ayaa ku biiray siyaasiyiinta mucaarad ka ee ka horjeeda dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed C/hi Farmaajo.
Mr. Kheyre ayaa la sheegay inuu hore xiriir hoose ula lahaa Siyaasiyiin Soomaaliyeed oo iyagana xiriir wanaagsan kala dhaxeeyo Imaa raadka Carabta, waxaana siyaasiyiinta la oga aday inuu xiriir hoose kala dhaxeeyay Xasan Cali Kheyre ka mid ah R/wasaarihii hore ee So omaaliya Cumar C/rashiid oo ah ninka ugu sar eeya siyaasiyiinta Imaaraadku maalgeliyo ee la doonayo in lagu bedelo dowladda hadda jirta.
Sida aan xog hoose ku helnay, R/wasaare Xasan Cali Kheyre oo 25-kii july xilka ay ka qa adeen Xildhibaanada G/Shacabka ayaa lagu wadaa inuu safar ku tego isku taga Imaaraad ka, halkaas oo uu kula soo kulmayo madaxda ugu sareysa dalkaas, wax ayna Dubai dooneysaa iney xooj iso galaangalk eeda siyaasadeed ee Soomaaliya.
Wararka qaar ayaa sheegeysa in Md. Xasan Cali Kheyre ay madaxda sare ee dowladda xilli danbe ogaadeen xiriirka qarsoo diga ah ee kala dhaxeeya Imaaraadka Carab ta, taasoo qeyb ka ahayd sababihii xilka looga qaaday, wuxuuna hadda dadaal ugu jiraa inuu sidii uu u noqon lahaa madaxweynaha Soom aaliya, ma adama uu ku dhawaaqay mushara xnim adi isa. Mr. Kheyre oo horay loogu xamanayay inuu xiriir kala dhaxeeyo Xukuumadda Dooxa, socd aalna uu ku tegay ka hor intaan xilka laga qaa din ayaa hadda arrintaas meesha ka baxday, waxaana xoogeysanaya siyaasiyiinta xiriir dhow la leh Imaaraadka Carabta.
Siyaasiyiinta taageerada ka helaya Imaara adka Carabta ayaa waxaa ugu horeeya Cumar C/rashiid oo la-taliye u ah dowladda Imaaraad ka una qaabilsan arrimaha Geeska Afrika, iya doo uu ka mid yahay siyaasiga C/raxmaan C/ shakuur iyo xubno ka mid kooxdii Qabyo
Cawad oo la kulmay Madaxda K/Galbeed iyo Puntland
Md.Axmed Ciise Cawad, Sii Hayaha Wasii rka Arrimaha Dibadda Somaliya ayaa Habeen hore M/Muqdisho ku qaabilay Madaxweyne-yaasha Puntland iyo K/ Galbeed. Wasiirka ayaa Siciid C/hi Deni, Cabcasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen) iyo masuuliyiin kale casho sharaf ugu sameeyayhoyga uu ka deganyahay M/Muqdi sho. Ilo wareedyo ayaa sheegaya inaanan kul ankan looga hadlin wax siyaasad la xiriira, isla-markaana uu ahaa mid looga nasanaayay shi rarka maalmihii la soo dhaafay ka soconayay M/Muqdisho.
Masuuliyiintan ayaa kulan ka duwan kulamadii horey ku qaa tay hoyga Wasiir Cawad, waa na ujeedka loo soo agaasimay kulankan.
Wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka Soomaaliya, Marwo Deeqo Yaasiin ayaa mar kii ugu horreysay si faah faah-faahsan uga ha dashay sharciga Galmada ee dooda adag ka dhex-dhaliyey Golaha Shacabka.
Wasiir Deeqo oo wareysi gaar ah siisay Sha belle TV ayaa marka hore shaaci ysay in sharc igan uu muddo 2 sano ah horya allo baarlama anka Soomaaliya, islamarkaana xildhi baanada loo qeybiyey bishii Septermber ee sanadkii la soo dhaafay 2018-kii.
Sidoo kale waxa ay intaasi ku da rtay inay sugayeen ka wasaarad ahaan in aqrinta 1aad uu baarlam aanku mariyo sharcigaas, ka dibna loo yeero, si ay faah faahin uga bixiso, balse waxa ay car rabka ku dhufatay in aysan taas dhicin, sida ay hadalka u dhigtay.
Deeqo Yaasiin oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay in muddo kadib ay maqashay in bishii Augusto ee sanadkan uu markale ka doo dayo G/Shacabka sharci la yiraahdo Galmada, kaas oo ay tilmaamay in wasaaradeeda aysan gudbin, shaqana aysan ku laheyn.
"Ka wasaarad ahaan shaqo kuma lihin sharci gaas Augusto sanadkan ayaa GShacabka wa xaan maqlay sharci Galmo la yiraahdo in la ke enay Baarlamaanka xildhibaanadiisuna ay iska diideen, laakiin waxaa ku sheegaa sharciga Galmada ma’ahan sharci aan annaga G/ kee nay.” ayey tiri W/haweenka XFS.
Sidoo kale waxa ay intaasi raacisay in shar cigan la siyaasadeeyey, islamarkaana ay ka dambeeyaan dad leh dano siyaasadeed.
"Waa la siyaasadeeyey xeerka Jinsiga, dadkii siyaasadeeyey Ilaah ayaan ku daayey” ayey markale tiri wasiiraddu.
Marwo Deeqo Yaasiin oo ka jawaabeysay dhaliilaha xooggan ee loo jeedinayey maalmi hii la soo dhaafay ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay in si shaqsiyan ah loo aflagaadeeyo, waxayna xustay in sharciga dambiyada jinsiga uu yahay sharcigii xukuumadda Somaliya.
"Sharcigaan ma’ahan sharciga wasiiradda, sharciga dambiyada jinsiga waa sharcigaXFS.” ayey sii raacisay.Hadalkan ayaa ku soo aada ya, iyada oo ay dood badan ka dhalatay hindi se sharciyeedka Galmada oo la sheegay inuu ka hor imaanayo Diinta Islaamka, waxaana si weyn uga dhiidhiyey guddo onka G/Shacabka dalka iyo inta badan Culim ada Soomaaliyeed.
Hay’adda Culimada Soomaaliyeed oo ku ba aqday dagaal ka dhan ah dhaqanada Diin ta ka soo horjeedo
Shir ay M/Muqdisho ku yeesheen Culimada, Qeybaha Bulshada iyo Hay’adaha Dowladda ayaa lagu falanqeeyay xaaladaha la xariira an shax xumada isa soo taraysa iyo mukhadaraat ama Ma andooriyaha dalka ugu sii fidaya si xowli ah.Hoos ka akhriso war-murtiyeedka
Shir ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ah aan Hotel Dayax, Shalay oo ay taariikhdu tah ay 2/Safar/ 1442, kuna beegan 20/Sep/2020, ayna soo abaabuleen culuma da Soomaaliyeed, ayna ka soo qaybgaleen qaybaha bulsha da,sida: Odayaasha Dhaqan ka,Haweenka , Dhallinyarada, Ganacsatada, Aqoon yahanka iyo Saxaafad da,sidoo kale ay ka soo qayb galeen hay’ada ha dowladda qaar ka mid ah, sida Wasaarad da Cadaaladda, Wasaaradda Warfaafinta, Wa saaradda Awqaafta, Booliiska soomaali yeed, shirkaas oo lagu falanqeeyay xaaladaha la xariira anshax xumada isa soo taraysa iyo mukhadaraat ama Maandooriyaha dalka ugu sii fidaya si xowli ah.
Shirka waxaa ka hadlay masuuliyiin matala ya dhammaan qaybaha ka soo qayb galay, wa xaana la is dhaafsaday xog ku saabsan mow duuca la isugu yimid ka dibna waxaa la soo jee diyay talooyin wax ku ool ah oo wax looga qa ban karo, waxana ka mid ah:-In ilaalinta ansha xa iyo la dagaalanka mukhadaraadka la siiyo mudnaanta koowaad, sida ay diintu na farayso masuuliyaduna
In hay’adaha dowladda ee ku shaqada leh ilaalinta Anshaxa guud ee Bulshada iyo wacyi galinta Ummadda ay iska kaashadaan sidii ay u yeelan lahaayeen qorshe midaysan oo la xar iirta. In qaybaha kala gadisan ee shacabka & hay’adaha dowladdu iska kaashadaan la da gaalanka anshax xumada iyo mukhadaraadka, culumadana loo fududeeyo dacwadda iyo wacyigelinta.
In dalka laga hir geliyo Hay’adda Wanaag fa ridda iyo Xumaan reebidda, loona magacaabo guddigii diyaarin.
in la dhiso gole culumo oo dastuuri ah oo hub iya is waafaqsanaanta xeerarka la soo saarayo iyo shareecada islaamka ,sida dastuurku qabo.
in la qabto shir weyne qaran oo ku saabsan la dagaalanka anshax xumada iyo mukhadiraad ka. in laga hortago oo la joojiyo wax kasta oo dhiirigalinaya anshax xumada iyo fuxshiga , si da is dhexgalka qaabka daran , iyo meelaha la gu tunto.
Bannaanbax ka dhacay Muqdisho
Dad u badan Haween iyo Dhalinyaro rag ah ayaa Shalay waxa ay babnaanbax cabasho ah ka dhigeen dhabarka dambe ee Saldhiga Booliska D/Xamarweyne, kuwaas oo ka cab nayay in Goobo Ganacsi ay lah aayeen la bur buriyay.
Banaanabaxaaysha qaarkood ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah Dowladda, iyaga oo shegay in Goob ahooda Gan acsiga oo nolol maalmeedka qoys as koo da ku maareyn jireen si bareer ah loo burbur iyay.
Qaar ka mid ah Bannaanbaxayaasha oo Wa rbaahinta la hadlay ayaa waxaa ay sheegeen in Goobaha laga burburiyay ay kiro ka bixin jire en,sidoo kale dowladda ay Canshuur ka qaa do, hayeeshee loogu bedelay in Goobahooda Ganacsiga laga bur buriyo. G/D/Xamarweyne Md.C/dir Maxamed C/dir oo kusoo baxay rabshado ka dhashay bana naba xa ayaa shee gay in dadka ku Ganacsada Go obaha la burb uriyay ay kasoo cawdeen Shacabka D/Xamar weyne, kadib markii ay waaye en wado ay mar aan.
Waxaa uu ugu baaqay Ganacsatada warata da ah ee bannaanbaxa sameeyay inay tagaan Xarunta Maamulka degmada si ay uga wada hadlaan xalka ugu habeen oo aan aheyn inay wadada ku ganacsadaan.
Madaxweyne Muuse Biixi Oo Caddeeyey Mowqifkiisa Hirdanka Saylici Iyo Saajin
Madaxweynaha Somaliland Md.Muuse Biixi Cabdi, ayaa u caddeeyey mowqifkiisa ku aad dan loollanka adag ee u dhaxeeya Madaxwey ne kuxigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Ca bdillaahi Ismaaciil (Saylici) iyo Wasiirka Ganacsiga Maxa mu ud Xasan Sacad (Saajin) ee kursiga 4aad ee Xisbiga Kulmiye ergo Dorraad u tag tay oo ka socotay Beesha uu ka soo jeedo Cabdirax maan Saylici.
Ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay kulan kan dhex maray Madaxweyne Muuse Biixi iyo Ergada Waxgaradka ah ee ka soo jeeday Bee sha Saylici, hase yeeshee sida way Wargeys ka Saxansaxo u xaqiijiyeen ilo wareedyo ka ag dhowaa kulankaasi, ayaa tibaaxay in Waxgar adkaasi u bandhigeen Madaxweynaha caba sho la xidhiidha sababta tartanka iyo buuqa loo gelinayo kursiga Guddoomiye kuxigeenka 4a ad ee Kulmiye ee uu wakhtigan ku fadhiyo Ma daxweyne kuxigeenku, iyaga oo ku dooday in arrintaasi kala qaybsanaan keentay.
Warku waxa uu intaasi ku daray in Md. Mu use Biixi Cabdi u sheegay Waxgaradkan ka so cday Beesha Saylici in mowqifkiisu yahay in arrinka Saylici iyo Saajin ay ka odayeeyaan Sa laadiinta iyo Waxgaradka 2da Beelood ee ay ka soo kala jeedaan, madaama oo ay tahay in iyaga dhex taalla.
Madaxweyne kuxigeenka Somaliland iyo Wasiirka Ganacsiga, ayaa muddooyinkii u dam beeyey waxa dhex taagnaa loollan adag oo dib edda u soo baxay, kaas oo ay ugu tartamaya an Kursiga Guddoomiye kuxigeenka 4ad ee Xisbiga Kulmiye oo la filayo in lagu doorto shi rweynaha Xisbigaasi ee bisha dambe dhaca ya. Kulamo hore oo lagu doonayey in 2dan ma suul mid ahaan uu ku tanaasulo, ayaa natiijo la’aan ku dhammaaday, iyada oo mid walba ku adkaysanayo isaga loo daayo.
G/Aqalka Sare ee B/Somaaliya Md.Cabdi Xaashi C/hi ayaa Shalay hoygiisa uu ka deg anyahay Muqdisho ku booqday Rwasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Kheyre oo qoraal kooban ka soo saaray kulankaas ayaa sheegay in guddoomiyaha uu uga mahad celinayo kaalinta uu ka qaatay xa alada kala guurka ah ee dalku ku jiro.
"Sharaf ayey ii ahayd la kulanka guddoomi yaha Aqalka Sare mudane Cabdi Xaashi C/hi oo Shalay isoo booqday. Waxaan uga mahad celiyay kaalintii uu ka qaatay hannaanka loogu gudbayo muddo xileed cusub ee DFS” ayuu qo raalkiisa ku yiri Kheyre.
Kheyre iyo Cabdi Xaashi ayaa isku mowqif ka ahaa maareynta hanaanka doorasho ee So omaaliya u jaheysaneyso, balse 2duba wa xay dagaal siyaasadeed kala kulmeen xafiiska madaxweynaha.
Wada-shaqeynta guddoomiye Cabdi Xaashi iyo madaxweyne Farmaajo ayaa haatan u muu qata mid aan wanaagsaneyn, halka Kheyre uu ku baxay khilaaf ka dhashay nooca doorasho ee dalka ka dhaceysa. Khilaafkan ayuu xoogiI su soo bilaawday intii aan la aadin shirarkii Dhuusamareeb ka dhacay, waxayna Kheyre iyo Cabdi Xaashi ka mideysnaayeen in dowlad da dhexe iyo D/G/yadu ka wada tashadaan si dii ay Soomaaliya doorasho uga dhici laheyd waqtigeeda. Hasa yeeshee Madaxweyne Far maajo ayaa ku adkeysanayey in guddiga doo rashooyinka loo daayo howshaas si doorasho qof iyo cod ah ay dalka uga qabtaan, balse dhawaan ayuu ka tanaasulay taas, isagoo aqb alay in la aado doorasho dadban.
Madaxweynaha D/G/Jubaland Axmed Max amed Islaam ayaa Shalay kulan la qaatay, Xi ldhibaanada 2da Aq al ee BFS ee lagas oo doorto Jubaland . Kulankan oo ahaa Qado sharaf uu Ma daxweynahu u sameyay Xildhibaanada, ayaa lagaga hadlayay Xaalada dalka, iyadoo sidoo kale Madaxweynaha uu Xil dhibaanada uga warbixiyay Xaalada Jubaland.
Xildhibaanada ayaa Madaxweynaha uga mahad celiyay sida uu wakhtigiisa ugu huray in xal laga gaaro jihada ay Soomaaliya uga gud bayso wakhtigan adag.
M/Garoowe ee Maamulka Puntland ayaa wa xaa gaaray wafdi ka socda dowladda Jabuuti oo uu hoggaaminay Safiirka Jabuuti u fadhiya Soomaaliya Aadan Xasan Aadan.
Madaxweyne ku-xi geenka D/ G/Puntla nd Axmed Cilmi Cis maan Karaash ayaa xafiiskii sa ku qaabilay Safiirka Jabuu ti ee Soo maaliya Danjire Aadan Xasan iyo wafdiga la socday.
Inta uu socday kulanka Axmed Karaash iyo Safiirka ayaa waxaa looga hadlay xoojinta xir iirka Iskaashi ee Puntland iyo Jabuuti, sida dhi nacyada Ganacsiga , maalgashiga iyo guud ah aan horumarka.
Md. Garaash ayaa u mahad celiyay Safiirka D/Jabuuti u fadhiya Soomaaliya Danjire Aadan Xasan Aadan iyo wafdiga la socday, kuwaasi oo Shalay gaaray M/Garoowe.
Madaxweynaha Puntland oo la ku